Ukuvuka Kwe-Camera Worn Camera Technology | Izixazululo ze-OMG
I-Rise of Body-Worn Camera Technology
Enye yezinto ezinkulu ezaziwa yithekhnoloji ukukhula kwayo nokuziphendukela kwemvelo. Kuqale njengokungelutho nje kwengcezu elula yobuchwepheshe, kepha ngokuhamba kwesikhathi kukhula eminyakeni entsha engeza isici esengeziwe futhi kuthola kalula futhi kube nobungane kakhulu ngeselula. Amakhompyutha ngaleso sikhathi ayekade egcwalisa igumbi futhi emakhulu kangako. Manje ikhompyutha ingaba yincane kakhulu ukuthi ingangena entanjeni, okufanayo kuyabonakala kumakhamera. Amakhamera enza ngcono imininingwane yokucaciswa futhi athuthukiswa kaningi, lokhu kunikeze amandla abacwaningi nomqambi ukuthi benze nezinhlobo eziningi zamakhamera angavumelani nomqondo wangaphambilini. Kunesidingo esikhulayo sokuhlangabezana nesidingo sokuphepha kwabantu
Imvamisa kuneminye yemihlangano yasekuseni lapho izikhulu zixoxa nezinye izikhulu, kuvame kakhulu ngomkhuba ophephile nokuqopha noma yikuphi ukuhlangana kwezigebengu ukusiza ekuphenyweni nasenkingeni. Kepha futhi kunezikhathi lapho okuqoshwa khona kucelwa ngesikhathi sokuphenywa kanti konke okubikwa ukuthi: “Mnumzana umcimbi wenzeka ngokushesha kangangokuba asibe nesikhathi esanele sokufaka ikhamera” lokhu kuholele ekutheni kube namaphoyisa amaningi azungeza , ukungakwazi ukukhiqiza ubufakazi bevidiyo kuhlale kwenza izinto zibe nzima kakhulu. Amacala asezakhamizi ayehlala edlange kakhulu futhi okuwukuphela kwendlela yokubhekana nakho kwakuwubufakazi bokuthi akwenzekanga njengokutsheliwe.
Okwesikhashana kokuhluleka ukuqopha okwenzekile kwenzeke kancane kancane ukuthi kube ukubuyiselwa emuva embuthweni wamaphoyisa athuthukile, lapho ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kuyinto ephambili. Isikhulu empeleni asinakusolwa, kunzima ukuba sesimweni esibi futhi into yokuqala engqondweni yakho ukuqopha ukuze ukwazi ukukhombisa ubufakazi ngokuhamba kwesikhathi. Lapho nje amaphoyisa engakwazi ukunikeza ubufakazi bevidiyo obusezinqubomgomo zawo, ukwethenjwa komphakathi kuyalahleka futhi kuba nzima kakhulu ukuphatha lelo cala. Kwesinye isikhathi, kungahle kube nesidingo sokuyalwa lapho iphoyisa lenze umsebenzi oyisibonelo noma linciphisa isimo esiyingozi kakhulu esingahle sikhuphuke. Lezi yizimo ezingenasizathu, iphoyisa elenze umsebenzi walo kahle kodwa elingakwazi ukunikeza ubufakazi bevidiyo liyajeziswa. Akekho umuntu okujabulelayo ukujeziswa ikakhulukazi lapho benze kahle. Ngisho induna yamaphoyisa ingahlupheka kwezepolitiki uma izimo ezinjengalezi zenzeka ngaphansi kolawulo lwayo, kungaholela odemeni noma imibuzo.
Sisesikhathini esisha, isizukulwane sokuqala samakhamera agqokwa ngomzimba asikwazi ukuqhathaniswa namakhamera wesizukulwane sakamuva. Besiba naleso sidingo esidala kakhulu sokucindezela inkinobho ukuze siqale ukuqopha, njengoba kuchaziwe ngaphambili lokhu kubangele izinkinga ezinkulu. Kwakukhona nokuthi ukubuyela emuva obekubandakanya ukusebenzisa iziteshi zama-dock ukulayisha okurekhodiwe kusuka kumakhamera. Lokhu konke kungafuneka kakhulu futhi kungakhululeki. Kusukela esikhathini sakudala, ubuchwepheshe bokuqinisa umthetho buye babonwa buvela ngendlela enkulu, ubuhlakani manje sebuvame kakhulu. Esikhathini esisha, ubuchwepheshe obukhethekile buyinkulumo yedolobha, i-automation icelwa kuzo zonke izingcezu zobuchwepheshe. Ukuvula ikhamera egqoke umzimba, ubuchwepheshe be-automation smart buyakwenza lokhu. Lokhu kwenze indlela yokuqopha esekwe kunqubomgomo inembe kakhudlwana futhi ingathembeki.
Ileveli yobudala entsha yokuqoshwa okuqhutshwa inqubomgomo
Umbutho wamaphoyisa ususebenzisile ukusebenzisa amakhamera amasha agqokwe ngemizimba amasha enzelwe ukuwaqopha ngokwawo, ukuqoshwa okuzenzakalelayo kuye kwamukelwa ngokusobala ukubheka izingqinamba ezibangelwe yisizukulwane esidala. Ngokubeka le mishini ezenzakalelayo emaphoyiseni asemsebenzini, manje angakwazi ukwenza indima yawo kahle. Amakhamera omzimba aqhutshwa yisoftware ahlelwe kahle ukuqala nokumisa konke ngokuya ngezinqubomgomo ezithile zokuqopha zama-ejensi. Ngokusebenzisa izibuyekezo zomoya (i-OTA) ezingathunyelwa futhi zilandwe ngamakhamera enkundleni. Ukuqopha okususelwa kwinqubomgomo yingakho sekuhambisane ngokungahambisani nezinqubomgomo ze-ejensi eziguquguqukayo. Ngamanye amagama, izinguquko ezenziwayo zingalungiswa kalula ngokumane ubuyekeze ikhamera yakho.
Ukufakwa kwezinzwa zemoto ezenzakalelayo kwenze ukuthi kwenzeke izinqumo ezilungisekayo, esiza i-automation rekhodi ukuqala lapho kwenziwa isenzo esithile emotweni. Isibonelo, ukuqoshwa kungaqala lapho kuvulwa ukukhanya okuphuthumayo kwemoto yamaphoyisa nokuvula umnyango. Lobu buchwepheshe obusebenzayo obusebenza kalula. Ezinye izinzwa zemoto ezibangela ukuqoshwa kwekhamera yile:
Isibhamu nokukhiya kwesibhamu
Lokhu izinzwa ezibangela ukuqoshwa ngokuzenzakalelayo. Kukhona ubuchwepheshe obusebenza ngesikhathi sokulandela unyawo, ngentuthuko yezobuchwepheshe be-accelerometer. Amakhamera wobudala obusha anganquma ukuthi ngabe isikhulu siyasebenza noma siyahamba, lokhu kungadala ngokuzenzakalela ukuqoshwa kwekhamera. Isilumkiso esingazibangela uma iphoyisa elilodwa liphansi; lokhu kusebenza ngendlela ehlakaniphile, uma ngabe isikhulu esisodwa sisenkingeni futhi singadinga ukwenziwa isipele. Uhlelo luqala ukuqoshwa ngokuzenzakalela futhi lubuye emuva kwemizuzu emibili yevidiyo nomsindo, lokhu kusetshenziselwa ukuxwayisa nokubiza izikhulu eziseduzane. Uhlelo alwenza okungaphezu kokuxwayisa izikhulu eziseduzane ngoba manje sezingene kuzo i-GPS. Indawo yesikhulu esisezansi nayo ithunyelwa kanye nesixhumo sokucindezela. Lokhu kuvumela impendulo esheshayo kanye nendlela engcono yezimo ezinjalo.
Ozenzakalelayo ushintsho lomdlalo
Obunye bobuchwepheshe obuthuthukisiwe obukade bukhona yizingcingo ze-Computer-Aided Dispatch (CAD), lokhu kuvumela inqubomgomo esekwe ngokuzenzakalelayo. Kuqopha ngokuzenzakalelayo lapho iphoyisa lithola ucingo lwenkonzo. Indawo yesenzo yenza ukuba ikhamera ivele lapho iphoyisa lifika endaweni ebiyabelwe, le ndawo ingahlanganisa indawo enomdubuli. Le ndawo yokusebenza ingaqalwa yi-CAD noma isethwe ngesandla.
Sengiphetha, njengoba ukuqoshwa okusekwe kunqubomgomo kuyaqhubeka kungumkhakha, abenzeli bomthetho bayasizakala ngokuhambisana nenqubomgomo njengoba kusenziwa amaphutha abantu kanye nokubandlulula okukhona. Ukuqoshwa okuzenzakalelayo kwenza ividiyo iyadingeka ikakhulukazi ngezikhathi ezibalulekile. Lobu buchwepheshe besikhathi esizayo bukhulisa ukuthembana komphakathi, ukwenza izinto obala, kanye nokuziphendulela emphakathini bekunikezelwa.
I-Rise of Body-Worn Camera Technology igcine ukuguqulwa: Okthoba 9th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3569 Ukubuka kwe-3 Namuhla